Qiimaha Arsenal Uga Baxeysa Saxiixa Dusan Vlahovic Oo Lasoo Bandhigay
HomeWararka CiyaarahaQiimaha Arsenal uga Baxeysa Saxiixa Dusan Vlahovic oo lasoo bandhigay
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay ku qasban tahay inay bixiso lacag dhan 150 milyan ginni si ay ula soo saxiixato bartilmaameedka koowaad ee Dusan Vlahovic oo ka tirsan Fiorentina .
21-sano jirkaan ayaa ka mid ah weeraryahanada loogu doonista badan yahay Yurub, iyadoo Gunners ay diyaar u tahay inay bangiga u jabiso si ay u qorto xiddiga heerka caalami ee dalka Serbia bisha Janaayo.
Kooxda Arsenal ee Waqooyiga London ka dhisan ee Tottenham Hotspur , iyo sidoo kale Manchester City , Real Madrid iyo Juventus ayaa sidoo kale xiiseynaya saxiixa Vlahovic.
Sida laga soo xigtay Daily Mail , kooxaha xiiseynaya waa inay bixiyaan 58 milyan ginni si ay ula soo wareegaan Vlahovic, halka weeraryahanka uu dalban doono mushaar ku dhow £ 300,000 todobaadkii oo qandaraas shan sano ah.
Vlahovic ayaa sidoo kale ku adkeysanaya in ku dhawaad ​​15 milyan ginni la siiyo wakiiladiisa, taasoo warbixintu ay ku andacooneyso inay caqabad weyn ku noqotay dhinacyo badan oo Yurub ah.
Fiorentina ayaa la rumeysan yahay inay quus ka taagan tahay inay iibiso ciyaaryahankeeda bishaan, kaasoo qandaraaskiisa ay ka harsan tahay wax ka yar 18 bilood.
Vlahovic hadda waa gooldhaliyaha ugu sarreeya Serie A, isagoo 16 jeer u dhaliyay La Viola 20 kulan oo uu saftay ololahan.